Ny OnePlus Nord dia mahazo OxygenOS 11 ary andiany OnePlus 7 sy 7T mahazo Open Beta 3 | Androidsis
Ny OnePlus Nord dia mahazo OxygenOS 11 ary andiany OnePlus 7 sy 7T mahazo Open Beta 3
OnePlus dia manolotra fanavaozana lozisialy vaovao amin'ny telefaona findainy marobe. El OnePlus AvaratraHo anao, ianao dia mahazo ny OTA azo antoka amin'ny OxygenOS 11 miorina amin'ny Android 11 izao, raha ny maodely andiany OnePlus 7 sy 7T kosa dia mahazo ny Sokafy Beta 3 an'ny OxygenOS 11 miorina amin'ny Android 11.
Toy izany koa. Angamba hitanao fa mahaliana fa ny eo afovoany dia mahazo ny kinova farany sy farany an'ny fanavaozana vaovao fa tsy ny avo lenta efa voalaza. Ny orinasa dia nanao laharam-pahamehana ny fahatongavan'ireo fonosana firmware voalaza ho an'ny Nord. Toy izany koa, ny OnePlus 7 sy 7T dia manakaiky ny fahazoana ny fanavaozana azo antoka ihany koa.
Inona no vaovao amin'ny fanavaozana OxygenOS 11 tsirairay avy ho an'ny OnePlus Nord sy OnePlus 7/7 Pro ary 7T / 7T Pro?
Ity ny changelog feno nomen'ny mpanamboatra ny OnePlus Nord sy ny fanavaozana OxygenOS 11 amin'ny endriny miorina amin'ny Android 11:
Fanavaozana ny Android kinova 11
Ny endrika UI vaovao dia manome anao traikefa ahazoana aina kokoa miaraka amin'ny fanatsarana antsipiriany isan-karazany
Nanatsara ny fahamarinan-toerana fampiharana sasany ary nanatsara ny traikefa
Fampisehoana tontolo iainana
Fomba fiambenana Insight vao nanampy, famoronana miaraka amin'ny Parsons School of Design. Izy io dia hiova arakaraka ny angon-drakitra fampiasana finday (Mandehana amin'ny: Fikirakirana - Fampidirina manokana - Clock amin'ny efijery manodidina)
Vao tsy ela akory izay no nanampy ny efijery Canvas foana, izay afaka mamoaka ny drafitry ny foto-kevitra amin'ny sary rehetra ary mampiseho azy eo amin'ny efijery hidin-trano (mankanesa any: Fikirakirana - Fampifanarahana - Wallpaper - Canvas - Safidio mialoha ny sary ary afaka mamokatra ho azy izy io
Nampidirina hotkey ho an'ny maody maizina, ajanony ny fikirana haingana hahafahana mamela.
Ankehitriny dia manohana ny fampandehanana mandeha ho azy ary manamboatra ny fotoana voafetra. (Mandehana any: Fikirakirana - Asehoy - maody maizimaizina - Mavitrika mandeha ho azy - Ataovy mandeha ho azy ny takariva ho amin'ny mangiran-dratsy / faran'ny ora voatondro
Fifanarahana mpampiasa talantalana vaovao
Nanampy widget iray momba ny toetr'andro miaraka amin'ny effets animations malina
Ny endri-tantara Story izay nampiana vao haingana, izay afaka mamorona tantara isan-kerinandro amin'ny alàlan'ny sary sy horonan-tsary eo an-toerana.
Hatsarao ny haingam-pandeha mba hanatsarana ny traikefa fijerena sary.
Etsy ankilany, ity ny changelog an'ny Open Beta 3 an'ny OxygenOS 11 mifototra amin'ny Android 11 ho an'ny fitaovan'ny andiany OnePlus 7 sy 7T, izay misy koa ireo Pro Pro, izay mazava ho azy:
Hatsarao ny vokarin'ny fanalana sarimihetsika.
Raikitra ny olan'ny tahan'ny entana mazàna amin'ny tranga sasany
Olana lagsy raikitra rehefa milalao horonantsary voarakitra an-tsary
Namaha olana kely mety hitranga amin'ny Double Tap to Wake
Namboarina ilay olana fa tsy afaka nilalao horonantsary HD i Netflix
Olana mangina namboarina rehefa novaina ho AptX ny protokolan'ny fitaterana Bluetooth
Fanatsarana ny fitoniana Wi-Fi ary nampihena ny fahatapahan'ny Internet.
Ny endri-javatra foana amin'ny fampisehoana dia tsy hita afa-tsy amin'ny OnePlus Nord sy ny kinova Pro an'ny OnePlus 7 sy 7T. Hiova tsy ho ela izany.
Tokony ho ireto fonosana firmware ireto efa misy manerantany ho an'ny singa rehetra. Raha tsy izany dia haparitaka tanteraka ao anatin'ny andro vitsivitsy. Azonao atao ihany koa ny manamarina raha efa manana ireo fanavaozana vaovao ireo ianao amin'ny alàlan'ny faritra tsirairay ao amin'ny fipetrahana ao amin'ny finday OnePlus.
Ary farany, ny mahazatra: manoro hevitra izahay ny hanana finday avo lenta mifandraika amin'ny tamba-jotra Wi-Fi miorina sy haingam-pandeha hampidina ary avy eo hametraka ilay fonosana firmware / beta vaovao, mba hialana amin'ny fanjifana ny angon-drakitra mpamatsy fonosana. Zava-dehibe ihany koa ny fananana haavon'ny batterie tsara hisorohana ny olana mety hitranga mandritra ny fizotry ny fametrahana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny OnePlus Nord dia mahazo OxygenOS 11 ary andiany OnePlus 7 sy 7T mahazo Open Beta 3
Ahoana ny fampiasana ny vokatra Morph amin'ny TikTok
Nanjary misy ny TikTok an'i YouTube